Zimbabwe's Tourism Minister Arrested on Graft Charges - allAfrica.com
Minister of Tourism Prisca Mupfumira has been arrested on corruption charges linked to the National Social Security Authority, a rare example of a sitting minister detained on such allegations in the graft-wracked country. Mupfumira is one of the high ranking ruling party officials that were implicated by the Zanu-PF Youth League as being involved in massive corruption scandals in Zimbabwe.
President Emmerson Mnangagwa's ruling Zanu PF party was at a loss of words following the shock arrest of Tourism Minister Priscah Mupfumira early Thursday, with spokesperson Simon… Read more »
THE Zanu PF youth league has welcomed Tourism Minister Priscah Mupfumira's arrest describing it as a sign President Emmerson Mnangagwa was ready to "walk the talk." Read more »
Zimbabwe: Minister Mupfumira to Spend Night in Cells
The Zimbabwe Anti-Corruption Commission (Zacc) late Thursday confirmed it had seized Tourism Minister Priscah Mupfumira but did not disclose the reasons behind the arrest. Read more »
Tourism Minister Priscah Mupfumira has reportedly been arrested by officials from the Zimbabwe Anti-Corruption Commission (Zacc). Read more »
263Chat, 25 July 2019
The minister of Tourism and Hospitality Prisca Mupfumira has been arrested by the Zimbabwe Anti-corruption Commission on alleged corruption charges. Read more »
Zimbabwe: Opposition MPs Demand National Social Security Audit Report
There was drama in the National Assembly Wednesday after opposition MDC MP's broke into song demanding the Speaker Jacob Mudenda charges Public Service Minister Sekai Nzenza with… Read more »
The New Humanitarian, 23 July 2019
Zimbabwe Standard, 14 July 2019
An international money laundering watchdog has put Zanu PF bigwigs and prominent people on its radar after ruling party youths named them in a list of people that are allegedly… Read more »
Zimbabwe: Ruling Party Moves Gear Up On 'Corrupt' Bigwigs
Zanu-PF First Secretary President Mnangagwa has tasked provinces to nominate Central Committee members into a commission of inquiry to investigate party bigwigs allegedly involved… Read more »
Corporate corruption as manifested through IFFs stands as one of the biggest challenges to overcome in order to addressing the twin evils of growing inequality and unemployment and… Read more »
Zimbabwe: Corruption Accused Bigwigs Back Down On Threats to Sue Matutu
Top Zanu-PF politicians and government officials embarrassed by the Zanu PF youth league after being named on a "rotten list" of economic saboteurs, have reportedly withdrawn their… Read more »
The Zanu-PF Youth League has stood its ground in the fight against corruption and revealed last night that a team of 17 lawyers had been lined up to defend lawsuits following the… Read more »
New Zimbabwe, 26 June 2019
As temperatures threaten to boil over in President Emmerson Mnangagwa's Zanu PF party, veterans of the country's liberation struggle have thrown their weight behind a controversial… Read more »
The Zanu-PF Youth League says it has heeded President Mnangagwa's call to fight corruption and yesterday audaciously named individuals, private sector executives and party bigwigs… Read more »